Ambongadiny Chandelier 86016 trano fandraisam-bahiny tsotra eropeana kanto kristaly mpamokatra chandelier mpamokatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier 86016 trano fandraisam-bahiny tsotra eropeana chandelier kristaly maoderina
Loko: fanahafana 24K
Fitaovana: Varahina + vera
Toerana fampiharana: 15-25m2
Style: haitraitra maivana
Manazava ny atiny am-bolo miaraka amin'ireo Amazone Chandelier mahafinaritra. Lit na tsy misy jiro, miaraka amin'ny endriny fitaratra fitaratra manjelanjelatra, ity jiro mamirapiratra ity dia hanazava ny toerana rehetra ao an-tranonao. Ny kristaly manjelanjelatra mahitsizoro dia mihantona amin'ny ambaratonga samihafa, misambotra sy mamoaka hazavana hamoronana lamina manaitra amin'ny faritra manodidina.
Famolavolana mendri-kaja sy kanto, mampiasa vera kanto avo lenta miaraka amina famaranana miloko maoderina mba hamoronana chandelier mahafinaritra
Mora apetraka, serivisy mahafa-po - ity jiro ity dia nandalo fanamarinana. Ity chandelier mihaja ity dia mora manangona ny firafitry ny jiro. Vita amin'ny torolàlana mazava sy ny fitaovana fametrahana rehetra izy io, azo apetraka haingana sy mora. Raha simba na very ny ampahany mandritra ny fitaterana dia azo alamina ny fanoloana. Azafady mba mifandraisa aminay mba hisolo ny ampahany amin'ny fotoana.
Teo aloha: Chandelier 66013 trano fandraisam-bahiny tsotra eropeana chandelier kristaly maoderina
Manaraka: Chandelier 86017 Trano fandraisam-bahiny tsotra eropeana Chandelier
Jiro latabatra SPWS-T004 Marbra miorina am-pitomaniana fatratra ...
Chandelier 33300 hotely kristaly labozia ...
Jiro latabatra SPWS-T003 Waterfall kristaly tsy manam-paharoa ...
Chandelier 33809 Fomba eropeana Retro kanto P ...